FIANARANTSOA : Nitokona ireo mpamboly voaloboka mpamatsy ny orinasa Lazan’i Betsileo
Amin’izao fotoana izao dia misavorovoro ireo mpamboly voaloboka mpamatsy ny orinasa mamokatra divay ao Matsiatra Ambony, ka mitokona nanomboka omaly ireo tantsaha. 28 juillet 2017
Raha ny fanazavana voaray avy any an-toerana dia efa tamin’ny taona 2015 ireo vondron’ny mpamboly ireo no tsy nandray vola vidim-boaloboka, ka izany no antony mahatonga ny fitokonana. Marihina fa tantsaha manodidina ny 600 eo ho eo no voalaza fa voakasik’ity raharaha ity.
Manoloana izay àry dia manome fe-potoana 15 andro izy ireo hamahan’ny orinasa ny olana mianjady amin’izy ireo. Raha mbola tsy misy vahaolana kosa anefa dia tsy maintsy handray fepetra hentitra kokoa izy ireo, raha ny tatitra hatrany. Vokatr’izay dia naneho ny heviny Raharimalala Lydia Tale Jeneralin’ ity orinasa ity fa “ manaiky izy ireo ny amin’ny handoavana ny karaman’ireo mpiasa tsy voaloa hatramin’ny taona 2015 lasa iny.
Nanamafy ihany koa ity Tale ity fa tsy vita ao anatin’ny fotoana fohy ny fotoana fandoavana izany noho ny trosa be miangona amin’ny orinasa ankehitriny. Anisany nolazainy aza ny hoe vao roa volana monja ny tenany no tafiditra eo amin’ny fitantanana, ka ny hanarina izany mihitsy no nahatonga azy tamin’io toerana io. Mbola eo am-pamahana olana momba ity raharaha ity izy ireo hatreto ary azo lazaina fa mbola mihenjana ny tady satria tsy manaiky intsony ireto mpamboly. Andrasana indray aloha izany ny tohiny zava-misy.